Home हङकङ समाचार देश समृद्ध हुन ब्यापार घाटा घटाउनु पर्दछ - डा. महाबिर पुन
राष्ट्रिय अबिस्कार केन्द्रका परीकल्पनाकार डा. माहाबिर पुनले सबै भन्दा पहिले देश समृद्ध हुन ब्यापार घाटा घटाउनु पर्दछ भनेका छन् । ब्यापार घाटा घटाऊनलाई आफ्नो उत्पादन बनाउन सक्नु पर्‍यो । हाम्रो देशमा ९० प्रतिसत जती समान बिदेश बाटै आयात हुने गर्दछ र आफुले उत्पादन गरेको १० प्रतिशत जती बिदेश निर्यात हुने गर्दछ । नेपालले गएको १० महिनामा ६२ अर्ब हङकङ डलर बराबरको सामान बिदेश बाट सामान आयात गरेको र त्यही १० महिनाको अबधीमा ५ अर्ब डलर बराबरको सामान बिदेश निर्यात गरेको छ । त्यही १० महिनाको अबधीमा बिदेश बाट रेमिट्यान्सको पैसा ४४ अर्ब डलर गएको थियो । रेमिट्यान्सको पैसा जोडेर पनी १३ अर्ब डलर अझै ब्यापार घाटा भएको भन्दै उदाहरण सहित् नेपाल गरीब भएको तर्क पेश गरेका थिए । यो ब्यापार घाटा घटाऊनलाई अविस्कार केन्द्रले देशको प्रतिभा भएको मान्छेलाई पहिचान गरेर उस्को अाइडियालाई फलाउने फुलाउने गर्छ र उनिहरुले उत्पादन गरेको कुनै न कुनै चिजको उत्पादनले ब्यापार घाटा घटाऊदै लैजाने गर्छ यो ३० ,३५ बर्षमा ब्यापार घाटा अवश्य घट्दै जाने बताएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा देश रेमिटेन्सले मात्र चलेको बताएको छ । ब्यापार घाटा घटाऊनको निम्ती आफ्नो उत्पादन बिदेश निर्यात बढाउन सक्यौ भने र बिदेशी उत्पादन आयात कम गरेर लैजान सके मात्र देश समृद्ध बन्दै जाने बताएका छन् । हाम्रो देशका बिकास गर्ने भनेको प्रतिभा भएको मान्छेले गर्ने हो तर हाम्रो सरकारले त्यस्ता प्रतिभावानहरुलाई देशमै राख्ने प्रयास गर्नै सकेको छैन । महाबिर पुनले बोल्ने क्रममा यस्ता प्रतिभावना ब्याक्तीहरुलाई अरु देशमा उच्च प्राथमिकता दिएर देशमै बस्ने बातावरण श्रीजना गर्दछन् । एउटाको प्रतिभाले लाखौं रोजगारको श्रीजना गर्न सक्छ । ५० बर्ष अगाडी कोरिया हाम्रो देश भन्दा गरिव थिए । यदी हाम्रो देशको सरकारले पनी त्यती बेलै देखी प्रतिभावान ब्याक्तीहरुको श्रीजनालाई मलजल गरीदिएको भए हाम्रो देश पनी धनी भै सकेको हुने थियो ।
राष्ट्रिय अविस्कार केन्द्रले नतिजा ठुलो नभए पनी सानो बाट काम गरेर लैजाने बताए । अभियानको निम्ती दान आवश्यक भएको र त्यो एक पटक दीने दानलाई दिगो बनाउन ५० करोड भयो भने १० मेगावतको हाइड्रोपावर बनाउन सक्छौ भने । यदी १० मेगावतको बिद्युत निकाल्यौ भने बर्षमा ३० देखी ३५ करोडको आम्दानी हुने स्रोत बनाउन सक्यौ भने प्रतिभा भएको मान्छेको पहिचान गरेर उनिहरुको प्रतिभा फल्न र फुल्न मदत् गर्न खर्च गर्दै लैजाने भनेका छन् ।
अहिले सबै मान्छे बिदेश पठाएर रेमिट्यान्स बाट आएको पैसाले देश बिकास गर्ने कुनै नेता अथवा सरकारले भन्छ भने त्यो बुद्दु नेता आथवा बूद्दु सरकार हो भनेर भने । रेम्ट्यान्सले ज्यान पाल्न हुन्छ तर देशको बिकास हुँदै हुँदैन । अहिले सरकारले गर्न खोजेको पनि त्यही हो । बिदेश बाट रेमिट्यान्स आयो भने देश चल्छ भनेर त्यहा भन्दा अर्को उपाया नै सोचेकै छैनन् ।
देशको बिकास हुन देशले ब्यापार गर्नै पर्छ । देशको ब्यापार गर्न प्रबिधीको बिकास गर्नै पर्ने हुन्छ । हाम्रो देशले अहिले सम्म पैसा कमाउनै जानेकै छैन । हाम्रो देशले अर्काको देशमा बनेको बस्तु त्यहा लगेर ब्यापार गरीरहेको छन् त्यसलाई ब्यापार नै भनिदैन त्यसलाई त खुद्रा ब्यापार भनिन्छ भन्दै अविस्कार केन्द्रको अभियानलाई मुर्तरुप दिन दान दिनेहरुले यो दान राष्ट्र निर्माणको लागी दिएको दान सम्झिन अवहान् गरेका छन् ।
मगर संघ हङकङको कार्यालयमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा मगर संघ हङकङ लगायत बिभिन्न संघ सस्थाहरुले महाबिर पुनले स्थापना गरेको अविस्कार केन्द्र स्थापनार्थ आर्थिक दान दिएका थिए । दान दिने सस्थाहरु मध्य मगर संघ हङकङले ३,००,०००(तिन लाख रुपैया) पाल्पा श्रीनगर समाज हङकङ बाट १,००,००० (एक लाख रुपैया) तमु समाज हङकङ बाट १,००,०००(एक लाख रुपैया) झापा मन्च हङकङ बाट १,००,००० (एक लाख रुपैया) समाज सेवी प्रेम गलामी मगर बाट १,००,००० (एक लाख रुपैया) लाङ्घाली कल्याण समाज हङकङ बाट ६६,९००(छ्यासठ्ठी हजार नौ सय रुपैया) तनहुँ समाज हङकङ बाट ५०,००० (पचास हजार रुपैया)हिन्स का अध्यक्ष बिनय शाह बाट २०,२५० रुपैया,खोटाड० समाजका भुपु अध्यक्ष तेज प्रकास राई बाट ११,१११ रुपैया, संस्कृती ज्वैलरीबाट रू १३,५००, चेस सोसाइटीका अध्यक्ष मोटी चाम्लिड० बाट नेपाली १०,००० रुपैया गरि जम्मा रू ८,७१,७६१। (आठ लाख एकहत्तर हजार सात सय एकसठ्ठी) हस्तान्तरण गरेका छन् ।